GIMP 2.10.28 inouya chete kugadzirisa bugs | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza kuti vanogadzira iyo GNU Image Manipulation Chirongwa vane nguva yakaoma kunyora nyowani yekuburitsa noti pane kuita shanduko kune yavo software kuti zviitike. Chinhu chakajairwa kune vamwe vagadziri ndechekuti ivo vanodhinda mukova vachitsanangura dzese nhau dzekuvandudza uyezve, kana panguva imwe chete, tinogona kuisa iyo nyowani vhezheni. Hazvina kudaro neyakanakisa yemahara imwe nzira kune Photoshop, sezvo, sezvakaitwa muzvikamu zvakapfuura, zvakauya pamberi GIMP 2.10.28 kupfuura chero chirevo chepamutemo.
Kunyangwe zvinhu zvisina kunyatsofanana. Kubva pasingasviki Muvhuro, Gunyana 6, uye mushure memwedzi mitanhatu yekukura, GIMP 2.10.26 yaiwanika muFlatpak vhezheni, uye pasina nguva yakareba yaonekwa mumabhuku eArch / Manjaro. Iyo vhezheni haina kubvira yaonekwa pane GIMP portal, enda wakananga kunopa GIMP 2.10.28. Maminetsi mashoma apfuura, vakaita zvepamutemo kuburitswa kweshanduro inopera muna 28, saka tinogona kutaura kuti vakasvetuka makumi maviri nematanhatu, sekutaura kwavo pachavo mutsamba yekuburitswa uku.
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti isu tatsika GIMP 2.10.26. Kanganiso yekuunganidza yakawanikwa uchangobva kumaka vhezheni yacho. GIMP 2.10.28 yakafanana isina kukanganisa. Tinokurudzira kusavaka nekushandisa GIMP 2.10.26.
GIMP 2.10.28 Zvakakosha
Bug inogadzirisa GIMP paWindows.
Iyo dockable Dashibhodhi ikozvino ine ndangariro rutsigiro muOpenBSD.
Kugadziridza kwekuita kweGIMP mune macOS Big Sur kwave kushandiswa mune macOS mapakeji kubvira GIMP 2.10.22 sekuyedza.
Aya anotevera plug-ins akagamuchira zvigadziriso: C-sosi, DICOM, GIF, PS, Sunras, BMP, DDS, PSD, TIFF, Gimpressionist, metadata muoni, uye akasiyana script-fu zvinyorwa pamwe neiyo script-fu muturikiri pachawo.
Yakagadziriswa zvimwe zvekuwanika nyaya mumatopiki, senge mhinduro yegonzo kana anonetsa mavara.
Chinyorwa chitsva cheScript-Fu (dir-make) chinokutendera kuti ugadzire madhairekitori kubva kumanyoro.
GIMP 2.10.28 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubva yayo yepamutemo webhusaiti. Vashandisi veLinux vanogona kuiisa mumhando dzakasiyana dzemapakeji, senge repamutemo repamutemo rekuparadzirwa kwedu kweLinux yatinogona kuisa zvakananga kubva kune yedu chitoro che software, iyo flatpak kana the Snap, kunyangwe iyo yekupedzisira ichigere kuwanikwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GIMP 2.10.28 inouya nekusvetuka vhezheni chete kugadzirisa bugs